Inona no ho avin'ny fanangonana tahiry Passive? | Martech Zone
Na dia mitanisa aza ny mpanjifa sy ny mpamatsy fanangonana angona pasif amin'ny maha loharanom-pahalalana bebe kokoa an'ny mpanjifa azy, manodidina ny roa ampahatelony milaza izy ireo fa tsy hampiasa data passive roa taona manomboka izao. Ny fikarohana dia avy amin'ny fikarohana vaovao notarihin'i GfK sy ny Institute for International Research (IIR) amin'ireo mpanjifa sy mpamatsy fikarohana tsena 700 mahery.
Inona no atao hoe Passive Data Collection?
Ny fanangonana angon-drakitra pasif dia ny fanangonana angon-drakitra ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fitondran-tenany sy ny fifandraisan'izy ireo nefa tsy mampandre na mangataka alalana amin'ny mpanjifa. Raha ny tena izy, ny ankamaroan'ny mpanjifa dia tsy mahatsapa akory hoe ohatrinona ny data tena azo, na ny fomba fampiasana na fizarana.
Ohatra amin'ny fanangonana angon-drakitra passive dia browser na fitaovana finday mirakitra ny toerana misy anao. Na dia mety tsindrio tsara aza ianao tamin'ny nanontanianao voalohany raha afaka manara-maso anao ny loharano, dia mirakitra an-tsoratra ny toerana misy anao avy eo ilay fitaovana.
Rehefa reraka ny mpanjifa amin'ny fiainany manokana ampiasana amin'ny fomba tsy noeritreretiny, dia nanjary nalaza kokoa ny safidy fanakanana doka sy fizahana manokana. Raha ny marina dia nanambara fotsiny i Mozilla fa nanamafy ny fomba fitetezana azy manokana ny Firefox manakana ireo mpanara-dia an'ny antoko fahatelo. Mety hijanona eo alohan'ny fitsipiky ny governemanta izany - izay mitady hiaro hatrany ny mpanjifa sy ny angon-drakitra.
Vokany Ny hoavin'ny fahitana ambara ihany koa fa:
Fepetran'ny tetibola dia ary mety hijanona ho lohalaharana amin'ny olan'ny fikambanana sy ny mpamatsy; fa karazana ahiahy hafa - manomboka amin'ny fampidirana data ka hatrany amin'ny olana ara-dalàna - dia hita fa mitovy lanja amin'ny lanjany.
Mpanjifa sy mpamatsy enina amin'ny folo eo ho eo no milaza fa hanao izany fikarohana amin'ny alàlan'ny fampiharana finday sy / na fitety finday roa taona izao - miaraka amin'ireo mpamatsy dia azo inoana fa hilaza fa efa nanao izany.
Hafainganana ny famoronana hevi-baovao hisy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitry ny orinasa dia hita ihany koa ho elanelana lehibe eo amin'ny sehatry ny indostria ankehitriny, isa faharoa amin'ny mpanjifa (17%) ary fahatelo amin'ireo mpamatsy (15%).
Manodidina ny iray ampahatelon'ny mpandray no nilaza fa ny fomba lehibe indrindra ananany amin'ny fanangonana angona roa taona manomboka izao dia ny fanangonana angon-drakitra tsotra na dia tsy mahavita ankehitriny aza ny roa ampahatelony. Ny roa ampahatelon'ny orinasam-pikarohana eny an-tsena dia tsy manantena ny hanao tahirin-kevitra passive afaka roa taona.
Fanangonana angona pasif: tsara sa ratsy?
Mba hahafahan'ny mpivarotra mitsahatra tsy manelingelina ary manomboka mizara tolotra misy ifandraisany, na dia nangatahana aza ho an'ny mpanjifa, ny mpivarotra dia tokony hisambotra angona. Ny angon-drakitra dia tokony ho marina mahavariana ary misy amin'ny fotoana tena izy. Ny fahamendrehana dia omena amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny angona avy amin'ny loharano maromaro. Ny fotoana tena izy dia tsy hitranga amin'ny alàlan'ny fanadihadiana na antoko fahatelo… Tokony hiara-hitranga amin'ny fitondran-tena ny mpanjifa izany.
Angamba mpivarotra no nitondra an'io ho azy ireo - nanangona angon-drakitra terabytes amin'ny mpanjifa, fa tsy nampiasa azy io velively mba hanomezana traikefa ho an'ny mpampiasa tsaratsara kokoa. Leo ny mpanjifa, mahatsiaro ho efa zatra sy iharan'ny fanararaotana fotsiny satria novidiana, amidy ary zaraina eo anelanelan'ny loharano an-taonina maro ny loharanon-kevitra.
Ny atahorako dia, raha tsy misy fanangonana angon-drakitra tsotra, dia manomboka miakatra ny rindrina. Tsy te hamono atiny sy fitaovana ary fampiharana maimaimpoana ireo orinasa mba hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa satria tsy afaka manangona angona azo ampiasaina avy amin'izany izy ireo. Tena te-handeha amin'izany lalana izany ve isika? Tsy azoko antoka fa manao izany isika… fa tsy mbola afaka manome tsiny ny fanoherana aho.
Tags: GFKIIRIvotoerana ho an'ny fikarohana iraisam-pirenenatsena fikarohanaangona pasiffanangonana angona pasiffandrefesana passivefanadihadiana
Aleon'ny mpanjifa misafidy sy hifaneraserana… na dia amin'ny horonan-tsary aza